Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Jamaica ayaa ku guuleysatay Abaalmarinta Socdaalka Adduunka ee 2021
Safarka Dalxiiska • Awards • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett (midig) wuxuu ku hakaday fursad-sawir oo uu la lahaa Agaasimaha Dalxiiska, Donovan White (bidix) iyo Graham Cooke, Aasaasaha, Abaalmarinta Socdaalka Adduunka, ka dib markii meeshii loo socday ay ku heshay abaalmarino badan Abaalmarinta Socdaalka Adduunka ee sannadkan. Jamaica waxaa loo magacaabay '' Goobta Hoggaaminta Kariibiyaanka '' iyo 'Goobta Dalxiiska ee Kariibiyaanka' halka Guddiga Dalxiiska Jamaica loo magacaabay 'Guddiga Dalxiiska Hoggaamiyaha Kariibiyaanka.' Jasiiraddu waxay sidoo kale ku guulaysatay laba qaybood oo cusub: 'Dalxiiska Dalxiiska ee Hoggaaminta Kariibiyaanka' iyo 'Goobta Hoggaaminta Dabeecadda Kariibiyaanka.'
Jamaica iyo ciyaartoy dhowr ah oo ka tirsan warshadaha dalxiiska ee maxalliga ah ayaa ku soo baxay guuleystayaal weyn Abaalmarinta Safarka Adduunka ee sannadkan. Jasiiradda waxaa loogu magac daray “Goobta Hoggaaminta Kariibiyaanka” iyo ‘Goobta Dalxiiska ee Kariibiyaanka,’ halka Guddiga Dalxiiska Jamaica loo magacaabay ‘Guddiga Dalxiiska Hoggaamiyaha Kariibiyaanka.’
Goobta Jamaica waxay si guul leh u sheegatay 2 qaybood oo cusub Abaalmarinta Socdaalka Adduunka ee 2021 ee Kariibiyaanka.
Brand Jamaica waa mid aad u xoog badan aadna ugu hanweyn wax kasta oo ay qabatay gaar ahaan xilliyadan adag.
Shaqo adag ayaa ka soo baxday kooxihii Wasaaradda Dalxiiska, Guddiga Dalxiiska Jamaica, iyo la -hawlgalayaasha dalxiiska.
Jasiiraddu waxay sidoo kale ku guulaysatay 2 qaybood oo cusub: 'Dalxiiska Dalxiiska ee Hoggaaminta Kariibiyaanka' iyo 'Goobta Hoggaaminta Dabeecadda Kariibiyaanka.'
Dalxiiska Jamaica Wasiir, Mudane. Edmund Bartlett, wuxuu muujiyey inuu ku faraxsan yahay aqoonsigan, isagoo la wadaagaya, “Jamaica runtii sharaf bay u tahay in sidan loo aqoonsado kooxda Abaalmarinta Socdaalka Adduunka ee sharafta leh. Runtii, abaalmarintan ayaa markhaati u ah kalsoonida warshadaha socdaalka ee caalamiga ahi ay ku leeyihiin Jamaica iyo wax walba oo aan haysanno. ”
“Waxaan si qumman u aqbalayaa abaalmarintan anigoo ku hadlaya magaca kooxda dadaalka badan ee Wasaaradda Dalxiiska, Guddiga Dalxiiska Jamaica, iyo hay’adaheena kale ee dawliga ah iyo sidoo kale dhammaan la -hawlgalayaasheena dalxiiska. Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo dhammaan daneeyayaashayada kuwaas oo ka go'naaday xilliyadan aan la hubin, ee soo baxay kuwa guuleystay. Brand Jamaica runtii aad buu u xoog badan yahay aad ayaana ugu faraxsanahay wax kasta oo aan wada dhammaynay, ”ayuu raaciyay.
Qeybaha hoose ee Hoteelka iyo Soojiidashada ayaa sidoo kale ka baxay kuwa guuleystay, iyadoo Dunn's River Falls loogu magac daray 'Soojiidashada Dalxiiska Hoggaaminta Kariibiyaanka' iyo Eclipse ee Half Moon, ayaa sidoo kale heshay abaalmarinta 'Huteelka Hoggaamiyaha Cusub ee Kariibiyaanka'.
Sandals Resorts International sidoo kale waxay ahaayeen guuleysteyaal waaweyn. Kooxda waxaa loogu magac daray 'Calaamadda Huteelka Hoggaamiyaha Kariibiyaanka', iyada oo kuwa ku guuleystay ay ka mid yihiin faylalka tacliinta ee Jamaican oo ay ku jiraan Sandals South Coast ('Caribbean's Leading Honeymoon Resort'); Sandals Montego Bay ('Dalxiiska Hogaaminta Jamaica') iyo Xeebaha Negril ('Hoyga Qoyska Jamaica ee Hoggaamiya Dhammaan').
Guuleystayaasha kale ee guuleystay waxaa ka mid ahaa Round Hill Hotel & Villas ('Caribbean's Leading Villa Resort' iyo 'Jamaica's Leading Hotel'); GoldenEye ('Dalxiiska Boutique Leading Caribbean'); Fleming Villa ('Huteelka ugu horeeya ee raaxada ee Kariibiyaanka'); Jamaica Inn ('Raaxada Hogaaminta Kariibiyaanka Dhammaan Suite Resort'); Strawberry Hill ('Hotel -ka Hogaanka Bada ee Jamaica); Hoteelka Maxkamadda Isbaanishka ('Hoteelka Ganacsiga ee Jamaica'); Naadiga Tryall ('Hoyga Huteelka Hormuudka Kariibiyaanka'); Margaritaville ('Goobta Madadaalada Hormuudka Kariibiyaanka'); Hyatt Ziva Rose Hall ('Hotel -ka Shirweynaha Hormuudka ee Jamaica'); Half Moon ('Jamaica's Leading Luxury Resort') iyo Madaarka Caalamiga ah ee Sangster ee Jamaica, oo ah 'Madaarka Hogaaminaya Kariibiyaanka.'
Hay'adaha kale ee guulaystay waxaa ka mid ahaa Club Mobay ('Qolka Madaarka Hoggaamiyaha Kariibiyaanka'); Kiraynta Baabuurka Jasiiradda (Shirkadda Kiraynta Gawaadhida Madaxa Bannaan ee Kariibiyaanka); Xarunta Shirarka Montego Bay ('Kulammada Hoggaaminta Kariibiyaanka & Xarunta Shirarka'); Jidadka Jasiiradda ('Hawl -wadeenka Dalxiiska Hoggaamiyaha Kariibiyaanka'); Tag! Socdaalka Jamaica ('DMC -da Kariibiyaanka ah' & 'Hawl -wadeenka Dalxiiska ee Kariibiyaanka').
Port Royal waxaa loogu magac daray 'Mashruuca Horumarinta Dalxiiska ee Kariibiyaanka'; Dekedda Montego Bay waxay dooratay 'Dekedda Guriga Hoggaamisa Kariibiyaanka'; iyo Port of Falmouth waxay u codeeyeen 'Dekedda Dalxiiska ee Kariibiyaanka'.
Abaalmarinta Socdaalka Adduunka waxaa loo tixgeliyaa inay tahay hay'adda hoggaamineysa ee aqoonsata oo abaalmarisa heerka sare ee safarka iyo dalxiiska. Waxaa la aasaasay 1993 si loo aqoonsado, loo abaalmariyo loona dabaaldego heer sare dhammaan qeybaha muhiimka ah ee safarka, dalxiiska iyo warshadaha soo dhoweynta. Maanta, sumadda Abaalmarinta Socdaalka Adduunka ™ waxaa loo aqoonsaday adduunka oo dhan inay tahay astaanta ugu dambaysa ee heerka sare ee warshadaha. Abaalmarinta Socdaalka Adduunka wuxuu u dabaaldegaa sannad -guuradii 28aad ee 2021.
Natiijooyinku waxay daba socdaan muddo sannad ah oo la raadinayey safarada ugu sarreeya, dalxiiska iyo sumadaha martigelinta. Waxaa codadka dhiibtay xirfadleyda wershadaha safarka, warbaahinta iyo dadweynaha kale, iyadoo qofka la magacaabay uu helay codadka ugu badan qeybta loo magacaabay inuu ku guuleystay.